Fianarantsoa : Lehilahy hita faty, tsy nisy tarehy sy hodi-doha intsony – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2018 → juillet → 21 → Fianarantsoa : Lehilahy hita faty, tsy nisy tarehy sy hodi-doha intsony
Mampihoron-koditra tanteraka ny tranga niseho tao an-drenivohitr’i Betsileo tao omaly. Lehilahy iray no hitan’ny fokonolona, nivalampatra efa tsy nisy aina intsony. Rehefa nohatonina akaiky anefa dia hita fa efa tsy nisy tarehy intsony izany lehilahy izany, tsy nisy hodi-doha intsony ihany koa. Karan-doha sisa teo amin’ny toeran’ny lohany. Karan-doha izay toa niniana nogoahina mihitsy nangalana ny masony, ny orony, ny vavany, … ny tarehiny rehetra iny. Omaly maraina izy ity no nisy nahita nivalampatra teo an-tsisin-dalana toy ireny olona mamo matory an-dalana ireny. Tsy nisy nanampo ny rehetra hoe olona efa tsy misy tarehy intsony izy ity. Mbola miakanjo tsara mantsy ilay lehilahy ary mbola teny am-babeny aza ny kitapony. Samy nihoron-koditra avokoa anefa raha nahita fa karana sisa no teo amin’ny lohany. Hatreto dia tsy fantatra mazava izay nahazo ity lehilahy ity. Nohanin’ny biby ve sa nisy namono ? Raha ity farany dia tamin’ny fomba feno habibiana tokoa no nanaovan’izay tsy valahara nanao izany. Ny mbola fanontaniana anefa dia hoe inona no antony nanalàna ny hodi-dohany sy ny tarehiny ? Ny trangan-javatra tahaka izao tokoa no mahatonga ny olona hihevitra fa misy eto amintsika ny halatra taova. Ary moa tsy izany ihany va no nahatonga ilay savorovoro nahafatesana olona sy nahapotehina zavatra maro tany amin’iny faritra Betafo iny. Mila haingana dia haingana tokoa araka izany ny fanadihadiana ataon’ireo mpitandro filaminana amin’ny toe-javatra tahaka itony.
boxdigit 25 juillet 2018 at 15 h 45 min · Edit
Tena tsara tokoa raha ny asa fanaovan-gazety eto amintsika no zaraina roa, misy atao ireo mpitantara sy mpitatitra dia misy ireo mpanao fanadiadiana. Io faharoa izay mbola tsy nahita ra ny tenako aloha hatreto.
Rice 21 juillet 2018 at 12 h 53 min · Edit
Tany Nosibe (Tranga iray)
Teny Alakamisy Fenoarivo (Tranga iray)
Teny Fenoarivo (Tranga iray)
Tany any faritan’ny toliara (Tranga telo)
Teny Ambohitrimanjaka (Tranga iray)
Tany Betafo (Tranga iray)
Ity tany Fianarantsoa (Tranga iray)
Efa nisy tranga iray heno tamin’ny hopitaly iray teto an-drenivohitra.
Mety mbola betsaka ny tsy voatantara ny any amin’ny faritra hafa.
Voalohany aloha dia tsy mba gasy no maniraka ireo olona manao izao.
Hita any ami’ny faritra Asie ny fahaiza-manao amin’ny fanaovana « greffe d’organe ». Ny gasy mbola tsy manana traik’efa momba an’io.
Ny gasy mahanantra ka mora rebirebena amin’ny resaka vola.
Izay manan-tsaina sy manam-pahendrena mety mahatakatra izay tiako hiaviana.
Nympanao gazety eto amin-tsika toa mitovy ahy olon-tsotra ihany. Mitantara fotsiny no hainy fa toa tsy mahay manao fanadihadiana lalina tahaka ny any amin’ny firenena hafa. Ireto misy fanontaniana : iza no hirahina (voafidy mialoha ve ireo olona irahina?) – rehefa azo ilay entana iza no mandray azy eto an-toerana – mandeha inona ireo rehefa miala eto Madagasikara – Firenena iza no andefasana azy.
Izaho eto dia mbola misaotra ireo mpanao gazety vahiny izay nahafantarako ny lalan’ireo Andramena Malagasy ary ny nahafantarako ny firenena (Tanana) izay tena nahazo tombontsoa avy amin’izany.